Taliye Odowaa oo Ciidamada Xoogga dalka ka bari yeelay…
Taliyaha CXDS General Odawaa Yuusuf Raage oo caawa Warbaahinta kula hadlay Xarunta Taliska guutada13-aad ee Cadaado oo ka tirsan qaybta 21aad ee Ciidamada Xoogga waxa uu kaga hadlay dadkii lagu dilay deegaanka Gololey Degmada Balcad Gobolka Shabeelaha Dhexe.
Dil wadareedkaan ayaa dhacay 28-kii bishaan, waxaana mar qura la dilay siddeed ruux oo todobo kamid ah ay ahaayeen howlwadeenada Xarun Caafimaad iyo qof ku sugnaa goobta oo lala watay dhaqaatiirta.
Taliye Odowaa ayaa sheegay in aysan dhacdadaas naxdinta leh ku lug lahayn Ciidanka Xoogga dalka, isaga oo tilmaamay in baarista socota ay qayb ka qaadanayaaan Saraakiisha Taliska Militariga Soomaaliya.
Dhacdada lagu dilay siddeeda ruux waxaa mas’uuliyaddooda dusha laga saaray Ciidamada Xukumadda, halka war kasoo baxay Xukumadda ay ku eedeysay in falkaas ay ka dambeeyeen waxa ay ugu yeereen Argagixiso.
Maamulka Hir-Shabeelle, DFS, Xildhibaanno, Wasiiro, Siyaasiyiin, Odoyaal dhaqameed, Waalidiin dadka la xasuuqay, Qaramada midoobay, Midowga Afrika, Hay’adaha u dooda Xuquuqda aadanaha iyo dhinacyo kale ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dil wadareedka dadkaas loo geystay, iyaga oo dalbaday in cadaaladda la horgeeyo gacan ku dhiigalyaasha.